Famatsiam-bola amin’ny tetikasa Akohonakà Mpiompy akoho 30 nahazo 530 tapitrisa Ariary
Natolotry ny Filoha Andry Rajoelina tamin’ireo 30 mianadahy mpiompy akoho fakana nofo sy akoho mpanatody lava ny famatsiam-bola ao anatin'ilay tetikasa "Akohonakà" avy amin'ny fandaharanasa nasionaly Fihariana.
Omaly teny Iavoloha no nanatanterahana izany izay nampirisihana azy ireo hanao ny asa ho matihanina. Nanambara ny filoha ary nampanantena fa mbola hisy ny tombana hatao amin’izy 30 mianadahy ireto ka izay hita fa mendrika sy nahavita vokatra tsara indrindra eo amin’ny fahaiza-mitantana dia omena fahafahana hisitraka indray tetikasa lehibe kokoa. Tsiahivina fa mpiompy avy amin’ny Faritra 3, Analamanga, Boeny ary Atsinanana, nanana faniriana hivelatra amin'ny seha-pihariana akoho manatody lava na akoho fakana nofo izy ireo. Eo anelanelan’ny 9 hatramin’ny 36 tapitrisa Ariary ny famatsiam-bola azo arakaraka ny isan’ny akoho nompiany sy ny halehiben’ny toerana niasany. Mitentina 530 tapitrisa Ariary ny totalin’ny famatsiam-bola nomena azy 30 mianadahy ireo ho famatsiana ny sakafon’ny akoho, ny hanaovana vaksiny, ny fanaraha-maso ireo zanak’akoho izay mahatratra 40 000 isa any ho any. Tosika lehibe ho azy ireo ny fisian'ity tetikasa Akohonakà ity hanitarana sy hampiroboroboana ny fandraharahana atao. Tanjona eto ny hanova mihitsy ny fomba fisakafon’ny Malagasy ka hihinanana ny henan’akoho azo hanoloana ny henan’omby, hoy ny fanazavan’ny filoham-pirenena. Hisy akony amin’ny toekarena ihany koa ny tetikasa satria sady afaka hamorona asa no hampitombo ny vokatra ary indrindra mamelona ny fiharian’ny mponina. Mialoha ny tena hidirana eo amin’ny asa dia hanaraka fiofanana ara-teknika sy ny fomba fitantanana mandritra ny 4 andro izy 30 mianadahy ireo. Tetsy an-daniny, nanazava ny mpikarakara fa hitarina amin’ny faritra hafa ity tetikasa Akohonakà ity. 60 Andro aorian’ny fanombohan’ny tetikasa no hanaovana ny famerenam-bola voalohany ary avy eo mitohy isaky ny avy mamoaka vokatra izany ka vinavinaina ho isaky ny 60 andro eo. Manana 18 volana izy ireo hamerenana ny vola amin’ny taha ambany 5%.